Tababar Looga Hadlayay Tahribka Oo Boosaso Lagu Qabtay. – SBC
Tababar Looga Hadlayay Tahribka Oo Boosaso Lagu Qabtay.
Posted by SBC Editor on Agoosto 6, 2015 Comments
Tababarkan oo socday mudo laba cisho ah ayaa waxa loga hadlayay sidii xal loga gari lahaa dhibatada afaynta tahribta oo in badan samaysay dhalinta somaliyeed ayaa manta lagu soo gabaga gabeyay magaladani Bosaso.
Tababarkan ayaa soo qaban qabiyay dalada dhalinyarada gobolka bari Ebyan iyo Hay’adda Puntland u qabilsan cilmi barista ee PDRC.
Munasabadi lagu soo xirayay taba barkan ayaa waxa goob jog ahaa mumulka gobolka bari kan degmada bosaso ,siyasi Tigey sarakisha katirsan PDRC iyo madaxda dalada ebyan.
Gudomiye ku xigenka 1aad ee gobolka bari Axmed cali cabdilahi cirro iyo ku xigenka duqa degmada bosaso Qasim ayaa dhalinta kala dar darmay inay ka tahribin dhulkoda hoyo.
Siyaasi maxamed yuusuf jaacam tigey iyo nabadoon cabdiqadir ibraahim xarago ayaa waxay si wada jira waxay uga hadlen dhibada uu leyahay tahribta, Waxeyna dhalinyarada oga digeen dhibaatada Arintaan.
Gudomiyaha dalada dhalinyarada ebyan faarax iyo cabdinasir buraale oo ah sarkaal ka tirsan hay’adda PDRC ayaa madasha ku soo bandhigay dhibadata xanuunka badan ay tahribtu ledahay.
Iskuduwaha wasarada hawenka Puntland Ayaan nuur iyo iskuduwaha wasarada dhalinyarada iyo ciyaraha Puntland maxamed cali oo si wada jira u soo xiray munasabada ayaa ka wasarado ahaan wacyi galin badan ay bixin donaan.
Maahan markii ugu horeysay oo Tababar looga hadlayo Dhibaatada tahriibka lagu qabto Magaaladda Boosaso ee xarunta gobolka Bari, waxaanna uu ku soo aadayaa xilli Mudooyinkii udanbeeyay ay Sii qul-qulayeen dhalinyaro farabadan oo ku haminaya Nolsha Yurub.
Xamse Cabdirshiid Jaamac.